Nagarik News - निन्दनीय आक्रमण
फ्रान्सको राजधानी पेरिसस्थित बाटाक्लान सिटी हलमा शुक्रबार राति भएको आतंककारी हमलाले फेरि संसारको ध्यानाकर्षण गरेको छ । त्यो आततायी घटनापछि मारिनेको संख्या कम्तीमा १ सय २८ पुगेको छ र यो थपिँदो छ ।
घाइतेको संख्या २ सयभन्दा बढी छ । आतंकको कुनै धर्म, जात र क्षेत्र हुँदैन । आतंकको निशाना विकसित र सशक्त सुरक्षा भएका मुलुक पनि सहजै बन्न सक्छन् भन्ने फेरि दोहोरिएको छ । सन् २००१ को सेप्टेम्बर ११ मा अमेरिकाको न्युयोर्कस्थित जुम्ल्याहा भवनमा भएको आतंककारी आक्रमणकै शृंखलाका रूपमा विश्वले यस घटनालाई लिएको छ । सामान्यतः युरोप र पश्चिमा विकसित मुलुकमा शुक्रबार रातिदेखि सुरु हुने सप्ताहन्तमा सर्वसाधारण रेस्टुरा, कन्सर्ट र सार्वजनिक स्थानमा धेरै उपस्थित हुन्छन् । पेरिस आक्रमणमा संलग्न आतंककारीले पनि त्यही सुखद् शुक्रबारको रातलाई आफ्नो आतंकको शिकार बनाएका छन् । पेरिसमै आतंककारीबाट यो वर्ष भएको यो दोस्रो आक्रमण हो । जनवरीमा पेरिसको व्यंग्यात्मक पत्रिका चार्ली हेब्डो र यहुदी सुपरमार्केटमा भएको आतंककारी हमलामा १७ जनाको मृत्यु भएको धेरैले बिर्सेका छैनन् । अहिले फेरि पेरिसमै भएको पछिल्लो आक्रमणले संसारभरका मानिसको मुटु हल्लाइदिएको छ ।
पछिल्ला केही वर्षयता आतंकवादको सहारामा राजनीतिक अभीष्ट प्राप्ति गर्ने काम हुन थालेको छ । राजनीतिको आवरणमा यस्ता कार्यले केही हदसम्म क्षमा पनि पाउने गरेका छन् । तर, शक्तिशाली विकसित मुलुकहरूले पनि यसप्रति कठोर रूप अपनाउने गरेका छन् । संसारभरका मुलुकले आतंकवादविरुद्ध साझा अभिव्यक्ति दिने र त्यसविरुद्ध सहकार्य गर्ने प्रयास पनि गरिरहेका छन् । आतंकवादविरुद्धको कठोर अभियान हुँदाहुँदै पनि उग्रता बढ्दै जानु चिन्ताको विषय हो । विशेष गरी मुस्लिम समुदायका केही धार्मिक उग्रवादी संगठनको यसमा संलग्नता देखिएको छ । युरोपमा मुस्लिम समुदायको ठूलो उपस्थिति छ । यस किसिमको उग्रताले त्यहाँका बासिन्दामा अवश्यै कठिनाइ उत्पन्न गराउने छ । सँगसँगै सम्बन्धित राज्यले लिएका नीतिले पनि बेलाबेलामा अल्पसंख्यक समुदायलाई बढी उग्रतातर्फ धकेल्दै गरेको अनुभव गर्न सकिन्छ । फ्रान्सकै हकममा मुस्लिम समुदायका महिलालाई सार्वजनिक स्थानमा बुर्का लगाउन सरकारले रोक लगाउने गरेको छ । सरकारको दृष्टिमा सबैलाई समान हैसियत रहेको देखाउन यसमा रोक लगाउने गरेको भए पनि यो अभ्यास गर्नेहरूले पक्कै पनि वञ्चित भएको महसुस गर्न सक्छन् ।
कुनै अर्थमा पनि आतंकवादलाई क्षम्य मान्न सकिन्न । सँगै यो उग्रता कसरी बढ्दै गइरहेको छ भन्नेमा पनि सम्बन्धित सरकारहरूले ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ । यस किसिमको आतंकले युरोपका नागरिकको खुला आवागमनलाई बाधा पार्ने देखिन्छ । त्यतिमात्र होइन, विस्तारै युरोपकै मोडलमा सीमाहरूलाई खुला गर्दै आर्थिक विकास र व्यापारलाई खुला गर्न प्रयासरत दक्षिण एसियाली मुलुकहरूलाई समेत निरुत्साहित तुल्याउने छ । अमेरिकी जुम्ल्याहा भवनमा आक्रमण गरेपछि 'आतंकवादविरुद्धको युद्ध'ले इराकलगायतका मुलुकमा प्रत्याक्रमण भएको थियो । त्यसले मुस्लिम संसारमा एक किसिमको अस्थिरता पैदा गरेको थियो । सर्वसाधारणको जीवनमा त्यसले पारेको प्रभाव अतुलनीय छ । अहिले पेरिस आक्रमणपछि यसमा संलग्न आतंककारी समूह आइएसको संलग्नताबारे चर्चा भइरहेको छ । र, यसले सिरियामा आक्रमणका निम्ति ढोका खुल्ने निश्चित छ । आइएसजस्तो आतंककारी र उग्र समूहप्रति युवाहरूको रोमाञ्चकारी आकर्षणको कारणबारे पनि ध्यान पुग्नु आवश्यक हुन्छ । के त्यस्तो कारण परेर पश्चिमा विकसित मुलुकका युवा/युवतीसमेत त्यसमा सामेल हुन गइरहेका छन् भन्ने समझदारी पनि हुनु आवश्यक छ । आखिर बाह्य आतंककारी समूहलाई मुलुक भित्र्याउन पनि मुलुकभित्रकै सहयोगीको समेत हात हुन्छ । तिनलाई सहयोग गर्ने र राज्यविरुद्ध अपराध गर्न प्रेरित गर्ने कारण के हो ? त्यसतर्फ पनि सरकारको ध्यानाकर्षण हुनुपर्छ । आफ्नै देशका नागरिक किन यो दिशामा लाग्न खोज्छन् ? अध्ययनको विषय छ । फ्रान्स सरकारले यो घटनापछि तत्कालै थालेका कारबाही र सर्वसाधारणलाई आश्वस्त पार्न खोजेका प्रयासले अरु सरकारलाई पनि तत्परताको सन्देश दिएको हुनुपर्छ । आतंकमा पर्नेहरूप्रति हाम्रो श्रद्धाञ्जली ।